जसले एक्लो प्रयासमा ५५ घरको बस्ती बसाए
उत्तरी धादिङको लापा–१, कपुर गाउँका ३६ वर्षीय दिनेश तामाङले त्यस्ता थुप्रै राम्रा मान्छे भेटेका छन्, जसले उनको सपनामा एक–दुई इँटा थपिदिए।
तिनैले थपिदिएका इँटाको खापले धादिङको ढोलामा एउटा सुन्दर बस्ती बसेको छ, जहाँ वैशाख १२ को भुइँचालोले विस्थापित ५५ परिवार नयाँ जीवन सुरु गर्दै छन्। त्यही भएर त, अचेल दिनेशलाई लाग्छ, ‘खोज्यो भने राम्रा मान्छे पक्कै भेटिन्छन्।’
‘दुई जनालाई बचाउन सकेनौं, बाँकीलाई तत्कालै उद्धार गर्यौं,’ दिनेशले सेतोपाटीसँग भने, ‘अर्को दिन आफैंले हेलिकप्टर बोलाएर उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएँ।’
दुई वर्षअघि नवलपुरमा भएको घटनाको विवरण सुनाउँदै दिनेश (बीचमा)। फाइल तस्बिर
दिनेश एक–दुई दिन रनभुल्लमा परे। के गर्ने कसो गर्ने भेउ पाउनै सकेनन्।
‘न म सबैले चिनेको मान्छे, न कलाकार, न नेता, न मेरो पुख्र्यौली सम्पत्ति। सहयोग माग्दै हिँडे पनि कसले देला र जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘सोच्दासोच्दै चिनेका साथीभाइ र संघसंस्थाको सूची बनाएँ। कसलाई भन्दा सहयोग गरिदेलान् भनेर मार्क गर्न थालेँ।’
सूचीमा भएकामध्ये उनी सुरुमा डाक्टर जर्ज बर्गिजको अफिसमा गए। एसिया फाउन्डेसनका नेपाल प्रतिनिधि बर्गिजसँग दिनेशको पुरानो चिनजान थियो। भुइँचालोअघि एसिया फाउन्डेसनले लापाको कपुरगाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाइदिएको थियो। त्यहीँ दिनेशले बर्गिजलाई चिनेका थिए।
राहत त पाए, तर सदरमुकाम धादिङबेँसीबाट २६ कोस टाढा तीन दिन पैदलदुरीमा लापासम्म पुर्याउने पो कसरी? उनले बर्गिजलाई आफ्नो यो समस्या सुनाए। बोकेर लैजान नसकिने दुखेसो पोखे। आखिरमा बर्गिजले नै सरकारी अधिकारीलाई भनेर हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिए।
एक सातापछि शनिबारकै दिन हेलिकप्टरमा राहत सामग्री बोकेर दिनेश लापा पुगे।
‘भीरको काखमा भए पनि आफू जन्मेको ठाउँ साह्रै सुन्दर लाग्थ्यो, तर म त्यहाँ पुग्दा एउटै घरको नामनिशान थिएन,’ उनले भने, ‘सबै जना रोइरहेका थिए। ९९ सय वर्षकी बूढीआमा पनि हामी यहाँ बाँच्न सक्दैनौं, अन्तै लैजाऊ बाबु भन्दै बिलौना गर्दै थिए।’
त्यो दिन उनले आफ्नी आमासहित अन्य घाइतेलाई हेलिकप्टरमा धादिङबेसी ल्याए। जिल्ला अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भयो। त्यसपछि सूचीमा रहेका अरूसँग पनि सहयोगको याचना गरे। कसैसँग राहत सामग्री मागे त कसैसँग हेलिकप्टरको भाडा जुटाए। एमएमएफ भन्ने संस्थासँग मिलेर उत्तरी धादिङका तीन गाविस सेर्तुङ, लापा र तिप्लिङमा १८ पटक राहत सामग्री पुर्याए।
बेलाबेला गाउँ जाँदा उनलाई लाग्थ्यो– यो ठाउँमा अब बस्न सकिन्न, गाउँ नै सार्नुपर्छ।
गाउँको हाल देखेर सरकारले नै सुरक्षित ठाउँमा सार्छ होला भन्ने उनलाई आश पनि थियो।
दिन बित्यो, महिना बित्यो। बर्खा सुरु हुने बेला भयो। तै सरकारले गाउँ सार्ने सुरसार देखाएन।
सरकारले किन बेवास्ता गरेको होला? गाउँको अवस्था थाहा नपाएर हो कि? दिनेशले यही सोचेर त्यहाँको भिडियो खिचे। पहिरोले बस्ती पुरिएको, मानिस खुला आकाशमा बसेको, डाँडामा ठूल्ठूला धाँजा फाटेको भिडियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई देखाउने योजना बनाए।
‘यो सबै हेरेपछि त उहाँहरूले केही गर्नुहोला भन्ने आश थियो,’ दिनेशले भने, ‘तर, खोज्यो भने भगवान बरु भेटिएला, हाम्रो सरकार भेटिन मुश्किल रहेछ। धेरै प्रयास गर्दा पनि उहाँहरूलाई भेट्न नसकेपछि मैले सरकारले केही गरिदेला भन्ने आशै मारेँ।’
सरकारबाट आशा मारे पनि हिम्मत भने हारेनन्।
त्यो भिडियो चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनलकी बोनी क्यापिचिनालाई देखाए। क्यापिचिना अनाथ बालबालिका र महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने क्यानडेली संस्थाकी निर्देशक हुन्। उनी बेलाबेला नेपाल आउजाउ गरिरहन्छिन्। नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत देशमा चाइल्ड हेभन इन्टरनेसनलले अनाथालय खोलेको छ।
क्यापिचिनासँग दिनेशको चिनजान २०५४ सालताकै भएको थियो।
दिनेश त्यतिबेला एसएलसी पास गरेर कलेज पढ्न खोजिरहेका थिए। तर, नौ जना भाइबहिनीको जिम्मेदारी र परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाले उनलाई थिचेको थियो। त्यसमाथि गाउँमा नजिकै कलेज थिएन।
उनी टाढाको कलेज जान सक्ने हैसियतमा थिएनन्। त्यसैले, बरु कलेज पढ्ने सपनालाई नै टाढा पठाइदिए।
उनी गाउँमै बसेर घरव्यवहार र सामाजिक क्षेत्रका काममा लागे। लापा स्वास्थ्य बिन्दु संस्था खोले। त्यो संस्थाले चन्दा उठाएर स्वास्थ्य चौकी भवन बनायो। उनले गाउँमै नमस्ते युवा क्लब गठन गरे। त्यो क्लब युनाइटेड मिसन टु नेपाल संस्थाको स्थानीय सहयोगी थियो। पछि त्यो नमस्ते ग्रामीण समाज संस्थाका रूपमा विकास भयो। त्यसले लापा लगायत उत्तरी धादिङका पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलालाई काठमाडौंसम्म ल्याएर उपचार गराउँथ्यो।
यही कामको सिलसिलामा दिनेश र क्यापिचिनाको चिनजान भएको थियो।
पछि उनै क्यापिचिनाले दिनेशलाई एचए पढ्न आर्थिक सहयोग गरेकी थिइन्।
‘सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बस त भनेको छ, तर पछि त्यो जग्गा छाड्नुपर्छ रे। त्यसपछि कहाँ जाने? आफ्नो थातथलो छाडेर आइसकेपछि त सधैंलाई बस्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि जग्गा किन्नुपर्यो आमै,’ दिनेशले प्रस्ताव राखे।
दिनेश क्यापिचिनालाई आमा भन्छन्।
क्यापिचिनाले आफ्ना लेखापाललाई ‘कति पैसा दिन मिल्छ’ भनेर सोधिन्। र, तत्कालै १५ लाख दिन स्वीकृति दिइन्।
त्यो रकमबाट दिनेशले धादिङको ढोला–७ तल्लो आलेमा प्रतिरोपनी डेढ लाख हालेर पहिलो प्लट जग्गा किने।
‘गाउँमा दुःख पाएका धेरै थिए, तर आमै (क्यापोचिना) ले एकदमै दुःख पाएका २० घर मात्र छानेर ल्याउनु भन्नुभएको थियो,’ दिनेशले भने, ‘मैले छ घर बढाएर २६ घरपरिवारलाई ढोला आउन भनेँ।’
यता दिनेश ढोला आएका परिवारको तत्कालको बन्दोबस्तीमा लागे।
एक सातापछि क्यानडाबाट क्यापिचिनाले १४ लाख रुपैयाँ पठाइदिइन्। उनले अर्को प्लट जग्गा किने र थप २९ परिवारलाई लापाबाट बोलाए।
पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छाडेर गाउँलेहरू बिरानो ठाउँमा आए। तर, त्रिपाल टाँगेर मात्र जीविका चल्दैनथ्यो। खाना, पढाइ र स्वास्थ्यको व्यवस्था पनि हुनुपर्यो।
दिनेश योजना बुन्न थाले।
उनले बस्तीका मान्छेलाई बिहान–बेलुकी छाक टार्नदेखि केटाकेटीका लागि कापी कलमको जोहो गर्न विभिन्न संस्था गुहारे। जसलाई भेटे पनि मनमा एउटै हुटहुटी थियो– ५५ परिवारलाई नै पक्की घर बनाउने।
यही सिलसिलामा उनले स्याल्भेसन आर्मी भन्ने संस्थाका मान्छे भेटे। यो क्रिश्चियनहरूले चलाएको च्यारिटी संस्था हो। दिनेशले उनीहरूलाई घर बनाइदिन अनुरोध गरे।
‘स्याल्भेसन आर्मीले एउटा घर बनाउन डेढ लाख रुपैयाँ दिन्छौं, सानो एकतले घर बनाऊ भनेको थियो,’ दिनेशले भने, ‘मेरो मनमा भने बस्ने घर पनि के एक तलेमात्र बनाउनु भन्ने लागेको थियो। हामीलाई गर्जो टार्नु थिएन, नयाँ जीवन सुरु गर्नु थियो।’
स्याल्भेसन आर्मीले सहयोगको बचन दिएको थियो, तर पैसा दिएको थिएन।
राहत संकलनकै क्रममा दिनेशको अर्को संस्थासँग सम्पर्क भयो।
स्पनेकी कीर्तिमानी आरोही इडुर्ने पासाबनको संस्था माउन्टेनर फर हिमालयज अर्गनाइजेसनले सुरुमा गोरखाको बारपाकमा काम गरिरहेको थियो। पछि बारपाकमा धेरै संस्था भएपछि उनीहरू धादिङतिर आएका रहेछन्। उनीहरूले ढोलामा पनि राहत सामग्री दिएका थिए। त्यही बेला दिनेशले घर बनाउने योजना सुनाए।
‘उनीहरूले १ लाख १० हजार युरो दिन्छौं भने,’ दिनेशले सुनाए, ‘त्यसपछि त ठूलो आशा पलायो, अब पक्की घरमा बस्न पाइन्छ भनेर।’
ती दुवै संस्थाले नेपालमा स्थायी अफिस खोलेका थिएनन्। गइसकेका संस्थाको भर परेर हुँदैन भन्ने सोचेर दिनेश सहयोगका लागि सेतो गुम्बा गए। गुम्बाका रिम्पोछेले पुनर्निर्माणमा काम गरेको उनले थाहा पाएका थिए।
‘एउटा लामाका माध्यमबाट सेतो गुम्बाका छोगिनिमा रिम्पोछेको दर्शन गरेँ र उनलाई फोटो देखाएर समस्या सुनाएँ,’ दिनेशले भने, ‘रिम्पोछेले मेरो कुरा सुन्नुभयो र अबको योजना के हो भनेर सोध्नुभयो।’
उनले घर बनाउने योजना सुनाए।
रिम्पोछेले एक जना लामालाई बोलाएर भने, ‘जति सक्छ उनलाई सहयोग गर्ने।’
त्यसपछि केही दिनमै रड र सिमेन्टका बोरा बोकेका ट्रक ढोला पुग्न थाले।
घर बनाइदिने दाता त भेटिए, तर त्यसको स्वीकृति पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग लिनुपथ्र्यो। ‘हामीले स्वीकृति लिन डिजाइन प्राधिकरणमा दियौं, तर कहिले के कहिले के भनेर अड्काइदिए,’ दिनेशले भने, ‘निवेदन प्राधिकरणमा थियो, हामी घर बनाउन थालिसकेका थियौं। आठ महिनापछि मात्रै उनीहरूले स्वीकृति दिए। त्यतिबेला हामीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिसकेका थियौं।’
घर बनाउन चाहिने सबै सामान सेतो गुम्बाले दियो। यसबीच पहिला प्रतिबद्धता गरेका दुई संस्था पनि फेरि सम्पर्कमा आए। उनीहरूले पनि पैसा दिए। बस्तीका सबै मान्छेले घर बनाउन श्रमदान गरे। जानेकाले नजानेकालाई सिकाए। केहीले गारो बनाए, केहीले पर्खाल लगाए। केहीले गिट्टी कुटे त केहीले सिमेन्ट घोले।
‘हामीले एक जना पनि बाहिरको मान्छे काममा लगाएनौं। सबै आफैंले ग¥यौं,’ दिनेशले भने, ‘हिजो लापामा हुँदा इँटासमेत नदेखेका दिदीबहिनी पनि अहिले हेड मिस्त्री बनिसकेका छन्।’
दिनेशको दौडधुप, सेतो गुम्बा लगायत संस्थाको पैसा र शिविरमा बसेकाको श्रमले गत चैतमा नेपाली शैलीका छाना भएका ५५ घर तयार भए।
घरभित्र चारवटा कोठा छन्। बस्तीमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र छ, जहाँ एक जना एचए बस्छन्। एउटा बौद्ध स्तुप छ। सार्वजनिक भान्छा छ। काम गर्नेहरू त्यही भान्छामा खाना खान्छन्। दसवटा सामुदायिक शौचालय छन्। ट्रान्सफर्मर, बिजुलीको पोल र तार घरसम्म पुगिसकेको छ। बिजुली बाल्न हरेक घरमा मिटर राख्ने काम एक सातामा सकिने दिनेशले बताए।
‘केही काम त बाँकी नै थियो, रिम्पोछेले दिन राम्रो छ भनेकाले चैत १६ गते नै सबैलाई घर हस्तान्तरण गर्यौं,’ उनले भने।
घर हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रमुख अतिथि थिए। सहयोग गर्ने सबै संस्थाका प्रतिनिधि आएका थिए। राति जब भुइँचालोले विस्थापित गाउँलेहरू त्रिपाल छाडेर नयाँ घरमा सरे, उनीहरूले रातभरि नाचगान गरेर खुसियाली मनाए।
‘त्यो दिन म कति खुसी भएँ शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘कति धेरै मान्छेले मैले भनेको पत्याए। मलाई यत्रो सहयोग गरे। म त यी सबैको ऋणी भएँ। यो ऋण कसरी पो तिर्ने होला? फेरि सोचेँ, यो ऋण तिर्न अब म सधैं अरूका लागि काम गर्छु, मेरो जिम्मेवारी अझै सकिएको छैन।’
हुन पनि काम धेरै बाँकी छन्। घरमा भर्याङ बनाउनुछ। झ्यालमा सिसा लाउनुछ। खानेपानीको ट्यांकी बनाउनुछ। हरेक घरलाई एउटा शौचालय र स्नानघर बनाउनुछ। स्वास्थ्य चौकीको पक्की भवन बनाउनुछ। बस्तीभित्र एउटा पुस्तकालय, सोलार बत्ती, बायो ग्यास र बौद्ध चलनअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न घाट पनि बनाउने उनको योजना छ।
‘योभन्दा ठूलो कुरा उनीहरूले घर मात्र पाएर भएन। आयआर्जनको काममा लगाउनुछ,’ दिनेशले भने, ‘अब त्यहाँ बस्नेलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न लागेको छु।’
‘भुइँचालोपछि विस्थापितले जीवन कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नेहरूका लागि यो राम्रो ठाउँ हो। हरेकका आफ्नै कथा छन्। एउटा घरमा हजुरआमा, आमा र छोरी पनि विधवा छन्,’ ‘दिनेशले भने, ‘त्यो बस्तीको अध्ययन गर्न आउनेका लागि होमस्टे पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ।’
दुई वर्षअघि भेटिँदा साथीभाइका पीडादायक कथा सुनाएका दिनेशसँग अहिले ५५ परिवारका ३ सय १० जनालाई घर बनाउन सकेको खुसी छ। तर उनको कथा अझै सकिएको छैन। अहिले पनि उनीसँग नयाँ योजना छन्, तर यी सबै काम गरिरहेको लापा स्वास्थ्य बिन्दुको खातामा पैसा छैन।
बस्तीमा स्कुल जाने उमेरका १ सय ४५ जना केटाकेटी छन्। तीमध्ये ४५ जनालाई गुम्बामा राखिएको छ। तिनलाई पढाउनुछ। लापामा अझै केही घर पहिरोको जोखिममा छन्। तिनलाई पनि सुरक्षित स्थानमा ल्याउनुछ।
खातामा पैसा नभए पनि उनलाई आशा छ, बाँकी योजनामा पनि सहयोग गर्ने कोही न कोही भेटिनेछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ८, २०७४ ११:२७:१८